Pakistan: Fahafatesan’i Bhutto sy ny fiantraikan’izany eo amin’ny fifidianana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 17 Oktobra 2018 3:19 GMT
Mbola ao anatin'ny dona, The Emergency Times, izay manara-maso akaiky ny fivoaran'ny toe-draharaha ara-politika ao Pakistana, manoratra hoe:
Pickled Politics manome rohy mankany amin'ny vaovao ary mpaneho hevitra iray manoratra hoe “Ny famonoana ireo olo-malaza ara-politika dia marika ratsy ho an'ny fiarahamonina, satria manaporofo mazava ny tsy fahampian'ny fahatokisana sy ny fanajana ireo andrim-panjakana sy ny fiarahamonina izany. Ny hany fanantenana dia hoentina eo anatrehan'ny fitsarana ireo mpanao heloka bevava.
Nisy fomba fijery hafa koa nipoitra, mijery an'i Bhutto ho mety ho mpitarika sy mpiantsehatra amin'ny politika iraisam-pirenena. Counter Terrorism Blog nilaza hoe:
The Moderate Voice kosa manana tantara fohy momba an'i Benazir Bhutto, anisan'izany ny vaovao momba ny rainy izay efa Praiministra tao Pakistana ihany koa, ary voaheloka ho faty tamin'ny taona 70 noho ny fiampangana mitovy amin'izay natrehan'i Benazir taty aoriana.
Avy amin'ny sisintany, Indian Muslims maneho hevitra momba ny famonoana, ary miady hevitra momba ireo teorian'ny teti-dratsy samihafa.
Mandritra izany fotoana izany, nahazo fanehoan-kevitra an-jatony ny lahatsoratr'i Sepia Mutiny momba ny fahafatesan'i Bhutto. Hoy ny mpitsikera iray